အမေရိကန်က ရုရှားသံတမန် ၂၄ ဦးကို စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မတိုင်မီ နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန် အမိန့်ထုတ် - Xinhua News Agency
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၇ ရက်က ရုရှားဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Anatoly Antonov အား ဆင်ဟွာသတင်းဌာနမှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန် ၊ ဩဂုတ် ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသဖြင့် ရုရှားသံတမန် ၂၄ ဦးကို စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မတိုင်မီ နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားရန် အမေရိကန်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီးက ဆိုသည်။
“ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မတိုင်မီ ဒီနိုင်ငံက ထွက်သွားဖို့ သံတမန် ၂၄ ဦးရဲ့ အမည်စာရင်းကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရရှိထားပါတယ်” ဟု ရုရှားသံအမတ်ကြီး Anatoly Antonov ၏ ပြောကြားချက်ကို ဝါရှင်တန်မြို့အခြေစိုက် The National Interest သတင်းဌာနက တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ သတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွင် ရုရှားသံအမတ်က “ အစားထိုးဖို့မရှိဘဲနဲ့ အဲဒီလူတွေအားလုံးနီးပါး ထွက်ခွာသွားရမှာပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမေရိကန်က ဗီဇာလျှောက်ထားမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ရုတ်တရက်တင်းကျပ်လိုက်တဲ့အတွက်ပါ” ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ရုရှားအရာရှိတွေအတွက် ဗီဇာသက်တမ်းကို ၃ နှစ် ကန့်သတ်ချက်ဆိုပြီး တစ်ဖက်သတ်ပြဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ အဲဒီကန့်သတ်ချက်မျိုးကို အခြားဘယ်နိုင်ငံမှ လုပ်ထားတာမရှိပါဘူး” ဟု Antonov က ဆိုသည်။
ရုရှားသံအမတ် Antonov ၏ မှတ်ချက်စကားနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ned Price က “ အနေအထားရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်က တိကျမှုမရှိပါဘူး၊ ပြီးတော့ အဲဒါက မှန်ကန်မှုလည်းမရှိပါဘူး” ဟု တနင်္လာနေ့တွင် တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ရုရှားအတွက် ဗီဇာသက်တမ်း သုံးနှစ် ကန့်သတ်ထားတာဟာ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားချိန်မှာဆိုရင် လူတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းဟာ ဒီနိုင်ငံက ထွက်ခွာသွားရမယ် ဒါမှမဟုတ် ဗီဇာသက်တမ်းတိုးဖို့ လျှောက်ထားရပါလိမ့်မယ် ၊ အဲဒါကို ဒီမှာ ဘာအကွက်တွေလာ ရွှေ့နေတာလဲ” ဟု နေ့စဉ်ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Ned Price ကသတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားသံအမတ် နှင့် သတင်းဌာနတို့ အင်တာဗျူးပြီး နှစ်ရက်အကြာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားရာ၌ ရုရှားနိုင်ငံ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့်
မော်စကိုမြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသော ရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ထမ်း ၁၈၂ ဦး နှင့် အမေရိကန်စာချုပ်ဝန်ထမ်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ဆက်လက်ခန့်ထားခြင်းမပြုဘဲ ရပ်ဆိုင်းပေးခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
အမေရိကန်သည် ယင်းကိစ္စရပ်ကို လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ရုရှားသံတမန်များကို ဗီဇာသက်တမ်း တိုးမပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်အပေါ် Price က တနင်္လာနေ့တွင် ငြင်းဆိုလိုက်ပြီး “ ရုရှားရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ကျွန်တော်တို့ဘက်က မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ ” ဟု ဆိုသည်။
ရုရှားသံတမန်များအား နှင်ထုတ်ခြင်း နှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းများ အမေရိကန်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အပေါ် ရုရှားနိုင်ငံက လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မော်စကိုမြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ရာထူးနေရာများအတွက် ရုရှားနိုင်ငံသားများ သို့မဟုတ် တတိယနိုင်ငံသားများ ငှားရန်း ခန့်ထားခြင်း ကိစ္စရပ်ကို ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဧပြီလတွင် လုံးဝ ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Aug.2(Xinhua) — The Russian ambassador to the United States said that Washington had asked 24 Russian diplomats to leave the country by Sept.3due to visa expiration.
“We receivedalist of twenty-four diplomats who are expected to leave the country before September 3, 2021,” Russian Ambassador Anatoly Antonov said in an interview with the Washington-based The National Interest published on Sunday. “Almost all of them will leave without replacements because Washington has abruptly tightened visa issuing procedures.”
Antonov said that “last December the State Department unilaterally establishedathree-year limit on the assignment period for Russian personnel in the United States that, as far as we know, is not applied to any other country.”
U.S. State Department spokesperson Ned Price responded on Monday that Antonov’s “characterization of the situation is not accurate. It’s incorrect.”
The Russian ambassador’s interview came two days after the State Department said it had laid off 182 local employees and dozens of contractors at U.S. diplomatic facilities in Russia as requested by Moscow.
Price on Monday denied that the United States is using Russian diplomats’ visas to retaliate while saying “we reserve the right to take appropriate response measures to Russia’s actions.”
Then Russian Deputy Defense Minister Anatoly Antonov speaks during an interview with China’s Xinhua News Agency in Moscow, Russia, April 17, 2016. (Xinhua/Bai Xueqi)